नेपाल र पाकिस्तानसँग वार्ता गर्न भारतकै सांसदले दिन थाले सरकारलाई दवाव - जनबोली न्यूज नेटवर्क प्रा. लि
गृहपृष्ठ » अन्तर्राष्ट्रिय » नेपाल र पाकिस्तानसँग वार्ता गर्न भारतकै सांसदले दिन थाले सरकारलाई दवाव
काठमाडौं । लामो समयदेखि भारत–पाकिस्तान जम्मू कश्मीर विवादलाई लिएर लडँदैछन् । यो बीचमा जम्मू कश्मीरमा सोचेनुसार विकास र समृद्धि नभएको बताइन्छ । ठुलो संख्यामा सैनिक तैनाथ भएको उक्त क्षेत्रमा अत्ति सामान्य कुराहरुको पनि अभाव देखिएको छ । यो विषयलाई भारतको संसदमा पाकिस्तानसँग वार्ता गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ ।
शनिबार लोकसभामा बोल्दै जम्मू–कश्मीरका पूर्व मुख्यमन्त्री फारुख अब्दुल्लाहले भने, ‘आज जम्मू कश्मीरको अवस्था यस्तो छ कि जहाँ प्रगति हुन्थ्यो त्यहाँ कुनै प्रगति हुँदैन । आज पनि हाम्रा बच्चाहरू र पसलेहरूसँग फोर जी सुविधा छैन जुन हामी भारतको अन्य ठाउँमा पाउँछौं । आज जब सबै इन्टरनेटमा हुन्छन् उनीहरू कसरी प्रशिक्षण (अध्ययन) गर्न सक्छन् ।’
उनले अगाडि थप्दै भने, ‘सीमामा झगडा बढ्दै छ र मान्छेहरूको मृत्यु भइरहेको छ । यस अवस्थाबाट बाहिर निस्कने एक मात्र तरीका छ । जसरी तपाई (भारत सरकार) ले चीनसँग कुरा गरिरहनु भएको छ कि उ पछि हटोस्, हामीले पनि हाम्रा छिमेकीहरूसँग कुरा गर्नु पर्छ ।’
उनले यो कुरा पाकिस्तानतर्फ संकेत गर्दै भनेको भए पनि नेपालका लागि पनि भारतलाई कडा सन्देश हो । अर्कोतिर नरेन्द्र मोदी सरकारका एक मन्त्रीले यस बयानलाई लिएर प्रतिकृया दिएका छन् । वर्तमान नरेन्द्र मोदी सरकारमा केन्द्रीय सामाजिक न्याय र अधिकारिता राज्य मन्त्री रहेका रामदास आठवले बोलेका हुन् ।
उनले भने, ‘म माननीय फारूक अब्दुल्लालाई सोध्न चाहन्छु कि भारतले कतिपटक पाकिस्तानसँग वार्ता गरेको छ ? जब अटल बिहारी जी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, मुशर्रफ भारत आएर आग्रामा छलफल भयो, तर पाकिस्तान यो स्वीकार्न तयार छैन । हामी चाहान्छौँ कि पाकिस्तान पीओके भारतलाई हस्तान्तरण गरोस भन्ने चाहन्छौं ।’ आठवले भारतका वरिष्ठ सदन राज्य सभाका सदस्य हुन् । उनी रिपब्लिकन पार्टी अफ इण्डियाका अध्यक्ष हुन् ।